Mpanao politika | Pakysse
Archive for the ‘Mpanao politika’ Category
Maninona i Marc Ravalomanana no tokony ho fidiana fa tsy ny hafa ?
septembre 7, 2018 in Aktivista, Demokrasia, Fandraisana andraikitra, Fanehoana hevitra, Fiainam-pirenena, fifidianana, Fitantanana mampiomehy, Fomba Fisainana Mivelatra, Internautes, internet, Madagasikara, Mpanao politika, nTIC, Olom-pirenena, Politika, T4D-M4D, TIM, Web 2.0, Zon'olombelona
Sary nalaina tao @ facebook Marc Ravalomanana ofisialy
Raha ny fiainam-pirenena misy eto no jerena amin’izao fotoana izao dia: “Ny tsara lasa ambany ary ny ratsy lasa ambony.” Samy manao izay tiany ny rehetra ary ilay kely mba namiratra dia lasa takony haizina avokoa.
Ilain’i Madagasikara sy ny vahoakany ve i Ravalomanana sa tsia?
ENY avy hatrany ny valiny raha ny amiko manokana no asian-teny. Tsy voatery hitovy ny fomba fijery rehefa politika no resahana fa izaho manokana dia resy lahatra (conviction) fa mila tadiavina miaraka aminy indray mandeha ilay very. Na tsy lafatra zato isan-jato aza ity rangahy ity dia andao ho jerena vetivety ireo teboka tsara mety azo raisina mikasika izany lehilahy izany.
Teboka tsara 1: Voafehiny ny afera sy ny vola maloto nandritra ny fitondrany
Rehefa nitabataba sy nihorakoraka ingahy Rajoelina sy ireo pombany fa mpangalatra sy mpamotika firenena i Marc Ravalomanana dia nomena an’ Rajoelina ny fitantanana ny raharaham-pirenena tamin’ny fidiran’ireo miaramila an-tsehatra.
Akory anefa ny hagagana, fa ny zavatra tsy noheritreretin’izy mianakavy dia lasa nitombo avo zato heny ny ratsy ary dia nololoavina ambony loha, ka lasa fampianarana niraikitra teo amin’ny vahoaka Malagasy hatramin’izao ora hanoratana izao ny lainga tsara lahatra sy ny fitaka be vava.
Antony 1: Nimenomenona ny rehetra fa nogiazan’i TIKO daholo ny afera izay nisy ka namoronany zalahy ny atao hoe TIKOLAND. EKENA ARY MARINA izany fa maro ireo mpandraharaha nitondra faisana nohon’ny hatendakan’ingahy Ravalomanana sy ny fianakaviany.
Ekena ihany koa, ary tsy azo lavina fa ilay TIKOLAND izay notabatabaina sy ilay hatendakanina dia, navadika ho KARANALAND, SINOALAND, VAZÀLAND (vahiny frantsay, afrikanina, arabo sns.) fa ny tena henjana dia ny nametrahana ny MAFIALAND teto amin’ity nosintsika ity.
Antony 2: Nitabataba ry zalahy fa lasany vazà daholo ny tany ary namidy tamin’ny fomba tsy mazava (afera DAEWOO). Nefa, nohon’ny tombotsoa iombonana dia tsy notanterahina ilay AFERA BE NAMPITOMANY ANY RAJOELINA SY NY FORONGONY (DAEWOO) fa dia natsahatra nohon’ny fahatogavan-tsainan’i Ravalo sy ny tariny.
Mbola akory indray anefa ny hagagana, fa noho ilay loha malemin’izy mianakavy mbola tsy mikatona angamba dia nosoloiny zalahy any SOALALA ilay resaka DAEWOO. Izany hoe, lasa natao fomba amam-panao, ilay mody mitaraina sy mitomany rehefa mitady zavatra. Akory atao fa dia misy olona resy lahatra amin izany fomba hafahafa be izany amin’izao fotoana izao.
Antony 3: Nivazavaza ry ingahy kely sy ny tariny fa mila amidy ilay fiaramanidina « boeing air force 1 » ka tokony omena ny vahoaka ilay vola namarotana azy. Akory be hatrany foana anefa ny hagagana, fa rehefa lafo ilay fiaramanidina, dia nosoloina fiaramanidina fako roa airbus mba hahazoana « leasing » (commission) hiveloman’izy mianakavy sy ny vady aman janany (Antony nahapotika ny orinasam-panjakana airmad).
Moa ve nilaina tokoa ny namotehana sy nandrondanana ilay fitondrana Ravalomanana t@ izany fotoana? Ny fametrahana ny politikany omaly tsy niova sa ny hisian’ny lova tsy mifindra eo amin’ny fanaovan-dratsy ny tanjona zalahy ireo?
Raha izay mantsy no izy, tsy aleo ihany ve niharitran’i Ravalomanana izay nahavita nametraka zavatra tsara, t@ antonony, nefa azo notsapain-tanana ho fitsinjovana ny tombotsoa iombonana.
Teboka tsara 2: Ravalomanana sy ny politika iraisam pirenena
Amin’ny maha zanantany frantsay antsika dia lojika raha niteraka korontana ara-tsaina teo amin’ireo olona kamo lahy sy kamo vavy be tenda ny fomba noentin’i Ravalomanana teo amin’ny lafiny ara politika.
Antony 1 : Tezitra ny fitondrana AREMA sy ny taranany satria, potika tsy nisy noraisina intsony ny afera maloton’izy mianakavy. Betsaka ireo lasa nanao sesitany ny tenany tany Frantsa, ao ihany koa ireo lasa nahantra tampoka nohon’ny fitsokan’ilay rivotra vaovao sns. Ingahy Ravalomanana ihany koa anefa, rehefa tonga teo amin ny fitantanana ny raharaham-pirenena i Andry Rajoelina dia voatery nanao sesitany ny tenany tao Afrika Atsimo.
Raha eo amin’zay lafiny fanaovana ny tenan’ny tsirairay sesitany izay fotsiny no jerena dia efa hita soritra sahady ny safidy ara-politika teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena noraisiny andaniny sy ny ankilany nandrintra ny fitantany zalahy ny firenena.
Antony 2: Mipetraka tsara eto ny « stratégie géopolitique » an’i Madagasikara miaraka amin’i Marc Ravalomanana satria, nisy fisokafana lehibe teo amin’ireo firenena nampiasa ny teny anglisy raha eo amin’ny lafiny ara-diplomatika no jerena.
Antony iray tena goavana izy io ho antsika izay tia mitady ny soa iombonana ho any Dago. Izany hoe, raha omena safidy ianao ry namana mpamaky dia jereo tsara ihany koa io lafiny iray io rehefa andeha handrotsa-bato.
Aza misalasala ny mifidy, aza misalasala mandamina ny sainao amin’ny tokony ho atao. Tsy aleo ve manarina toy izay mamotika tahakan’ny fomba zalahy ireo. Sa aleo manaiky fahatany, tsy manana hazon-damosina, tia mimenomenona lava satria, ho entiny olona amin’ny sangany sns.
Ravalo fidiana raha te hanangana indray ianao, Ravalo omena ny vato raha olona tia miasa ianao
Ankoatra ireo olona tia mangalatra, mandainga, mandromba, mamono olona, mpanao kolikoly sy ny ratsy rehetra mifandraika @ izany dia mazava ho azy fa i Marc Ravalomanana dia tsy maintsy atao fahavalo ary tsy ho tian’izy mianakavy ireo. Hita taratra ihany koa fa ireo olona tena tia miasa no mankasitraka ny fitantanan’ingahy rainy sy ny antoko politika TIM.
Mbola santatra ambavarano ihany moa ity asa soratra mikasika ny filoha teo aloha ity fa mbola ho zaraina amintsika miandalana eto ihany ny vaovao mahakasika ny paikady hitondrany ny firenena raha izy no lany eo.
Eto ampamaranana Tompokolahy sy tompokovavy, manasa anao hanamarika ny laharana 25 @ faha fito ny volana novambara ao anatiny bileta tokana.